Inona no fiantraikan'ny fiarovana amin'ny Internet amin'ny SEO | Martech Zone
Fantatrao ve fa manodidina ny 93% amin'ireo mpampiasa no manomboka ny traikefany amin'ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny fanoratana ny fangatahana ao anaty motera fikarohana? Tsy tokony hahagaga anao ity tarehimarika ity.
Amin'ny maha mpampiasa Internet antsika dia lasa nahazatra anay ny nanamora ny fitadiavana izay tena ilainay ao anatin'ny segondra vitsivitsy avy amin'i Google. Na mitady fivarotana pizza misokatra eo akaiky eo izahay, torolàlana momba ny fomba fanjairana, na ny toerana tsara indrindra hividianana anaran-tsehatra, manantena izahay fa hahazo valiny mahafaly eo noho eo sy kalitao izay manome fahafaham-po ny fikarohantsika.
Ny sandan'ny fifamoivoizana biolojika dia nametraka ny fanatsarana ny motera fikarohana satria izy no vato fehizoro amin'ny fananganana fahitana tsara kokoa an-tserasera. Google dia mamokatra mihoatra izao Fikarohana 3.5 miliara isan'andro ary ny mpampiasa dia mahatsapa ny SERP (pejin'ny valin'ny motera fikarohana) ho toy ny mari-pamantarana azo itokisana momba ny fifandraisan'ny tranonkala.
Raha mikasika ny fampiharana SEO mahomby dia fantatsika rehetra ny fototr'izany. Soso-kevitra ny fampiasana teny fanalahidy mahomby sy stratejika, ary koa fanamafisana ireo tag ALT, miakatra miaraka amin'ny famaritana meta mety, ary mifantoka amin'ny famokarana atiny tena izy, ilaina ary sarobidy. Ny fananganana rohy sy ny fahazoana rohy dia ampahany amin'ny piozila ihany koa, ary koa ny fanamorana ny loharanom-pifamoivoizana ary ny fampiasana paikady fizarana atiny lehibe.
Fa ahoana ny fiarovana ny tranonkala? Ahoana no fiantraikany amin'ny ezaka SEO anao? Google dia ny hahatonga ny internet ho toerana azo antoka sy mahafinaritra kokoa, noho izany ianao dia mety mila manamafy ny fiarovana ny tranokalanao.
SSL dia tsy fiarovana fanampiny intsony, fa ilaina
Google dia nanohana tranokala azo antoka ary nanome sosokevitra tranonkala dia tokony hifindra amin'ny HTTPS amin'ny alàlan'ny fahazoana ny mari-pankasitrahana SSL. Ny antony lehibe indrindra dia tsotra: voaangona anaty kaody ny data, hisorohana ny fampiasana diso ny tsiambaratelo sy ny fampahalalana saro-pady.
Ny fifanakalozan-kevitra HTTP vs. HTTPS ao anatin'ny tontolon'ny SEO dia nirehitra tamin'ny 2014 rehefa nanambara i Google fa azo antoka ny tranokala azo tratrarina. Tamin'ny taona manaraka, nanjary nazava fa mitondra lanjany bebe kokoa io famantarana filaharana io. Tamin'izany fotoana izany dia nitatitra i Google fa ny fananana mari-pankasitrahana SSL dia mety hanome tombony mifaninana amin'ny tranokala ary ho toy ny tiebreaker eo anelanelan'ny tranokala roa izay, mihoatra na latsaka, mitovy kalitao.
Ilay fiaraha-miasa goavambe fianarana notarihin'i Brian Dean, Semrush, Ahrefs, MarketMuse, SimilarWeb, ary ClickStream, dia nanadihady valim-pikarohana Google 1 tapitrisa ary nahatsikaritra ny fifandraisana misy eo amin'ny tranokala HTTPS sy ny laharana voalohany. Tsy ilaina intsony ny milaza izany, tsy midika akory izany fa ny fahazoana mari-pankasitrahana SSL dia manome anao toerana ambony tsara kokoa, ary tsy izany koa ny famantarana laharana lehibe iankinan'ny algorithm.
Google koa dia namoaka a drafitra dingana telo mankamin'ny tranonkala mahomby kokoa sy azo antoka kokoa ary nanambara ny famoahana ny fanavaozana Chrome 68 ho an'ny Jolay 2018, izay hanamarika rehetra Tranonkala HTTP satria tsy azo antoka ao anaty tranokala malaza indrindra. Izy io dia dingana feno fahasahiana, saingy lozika, hiantohana ny fifamoivoizana voaaro manerana ny tranonkala manerantany, ho an'ny mpampiasa rehetra, tsy an-kanavaka.
Ny tranokala HTTPS dia antenaina ho lasa tsy tonga lafatra, saingy maro ireo webmaster no mbola tsy fantatra ny fomba hahazoana ny mari-pankasitrahana SSL ary maninona no misy dikany lehibe toy izao izy ity: ireto misy tombony roa tsy azo lavina, na amin'ny alàlan'ny SEO na amin'ny fitazomana sary marika tsara:
Andrasana ny fanamafisana ny laharana ho an'ny tranokala HTTPS
Tratra ny ambaratonga azo antoka amin'ny fiarovana sy ny fiainana manokana
Matetika dia mavesatra kokoa ny tranokala
Ny tranokalan'ny orinasanao dia manana fahatokisana bebe kokoa ary manangana fitokisana (araka ny Fikarohana HubSpot, 82% amin'ireo namaly no nilaza fa hiala amin'ilay tranonkala tsy azo antoka)
Voaro soa aman-tsara ny angona maivana rehetra (ohatra ny mombamomba ny carte de crédit)
Raha tsorina, miaraka amin'ny HTTPS, dia voatahiry ny maha-azo itokiana, ny tsy fivadihan'ny angon-drakitra ary ny tsiambaratelo. Raha HTTPS ny tranonkalanao, dia misy antony ampy ampy hanomezan'i Google valisoa anao amin'ny maha-olona mandray anjara amin'ny fiarovana ny tranokala amin'ny ankapobeny.
Azo vidiana ny mari-pankasitrahana SSL, saingy misy ihany koa ny fandraisana andraikitra ho an'ny tranonkala iray voaro amin'ny fiainana manokana izay manome maimaim-poana ny cryptography maoderina azo antoka, toy ny Andao isika hamehy. Aza adino fotsiny fa ny mari-pankasitrahana nomen'ity fikambanana manampahefana ity dia maharitra 90 andro ary avy eo tsy maintsy havaozina. Misy safidy automatisation ny fanavaozana, izay azo antoka fa miampy.
Aza atao lasibatry ny mpanao heloka bevava anaty Internet
Nivoatra ny heloka bevava amin'ny cyber: lasa nanjary isan-karazany, be pitsiny kokoa ary sarotra tohina izy ireo, izay mety handratra ny orinasanao amin'ny sehatra maro. Amin'ny tranga henjana indrindra dia voatery miato ny asany ny orinasa mandra-pilamin'ny lesoka ny fiarovana ny tranokala, izay mety hiteraka fidiram-bola very, nahena ny laharana, ary na dia ny sazy Google aza.
Toy ny hoe tsy manahirana ny manafika ny hackers.
Andao izao hiresaka momba ny fisolokiana mahazatra sy ny fanafihana hacker ary ny fomba hanimban'izy ireo ny ezaka SEO anao.
● Fanararaotana tranokala sy fanararaotana mpizara
Ny fanesorana ny tranokala dia fanafihana tranokala iray manova ny fisehoan'ny tranokala. Matetika izy ireo dia asan'ny defacers, izay miditra an-tserasera amin'ny mpizara tranonkala ary manolo ny tranokala nampiantrano azy ireo ary izy ireo dia iray amin'ireo olana lehibe raha ny amin'ny filaminan'ny Internet no resahina. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia manararaotra ny fahalemen'ny mpizara ireo mpijirika ary mahazo fidirana amin'ny fitantanana amin'ny alàlan'ny Tsindrona SQL (teknika fanindronana kaody). Fomba mahazatra iray hafa no tonga amin'ny fampiasana diso protokol fandefasana rakitra (izay ampiasaina amin'ny famindrana rakitra eo anelanelan'ny mpizara sy mpanjifa amin'ny tamba-jotra solosaina) hahazoana fahazoana vaovao saro-pady (antsipirihany amin'ny fidirana) izay ampiasaina hanoloana tranonkala iray misy iray hafa.
Nilaza ny statistika fa nisy izany farafaharatsiny 50.000 ny fahombiazan'ny tranonkala amin'ny 2017, ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia miresaka momba ny tsy fetezan'ireo tranonkala mahasoa izahay. Tanjona lehibe iray no ataon'ireto fanafihana hacker ireto: natao hanaratsiana ny orinasanao sy hanimba ny lazanao izany. Indraindray, ny fiovana natao dia misoko mangina (oh: ny hackers dia manova ny vidin'ny vokatra ao amin'ny magazanao an-tserasera), amin'ny fotoana hafa - mampakatra atiny tsy mendrika izy ireo ary manao fanovana mahery vaika izay sarotra tsy hita.
Tsy misy sazy SEO mivantana ho an'ny tsy fetezan'ny tranonkala, fa ny fomba isehoan'ny tranokalanao amin'ny SERP dia niova. Ny fahasimbana farany dia miankina amin'ny fanovana natao, saingy azo inoana fa tsy hifandraika amin'ny fanontanianao taloha ny tranokalanao, izay hampidina ny filahanao.
Ny karazana hacking ratsy indrindra dia ny mpizara lasibatra amin'ny ankapobeny, izay mety hiteraka vokany mahatsiravina. Amin'ny alàlan'ny fahazoana miditra amin'ny mpizara voalohany (izany hoe ny "solosaina mastermind"), dia azon'izy ireo atao ny mitrandraka izany mora foana ary mifehy tranonkala marobe izay ampiantranoina ao.
Ireto misy fomba sasany hisorohana ny fianjerana amin'ny maha-olona azy:
Misafidiana rindrambaiko rindrambaiko azo antoka (WAF) azo antoka - mampihatra fitsipika mifehy ny fanafihana mahazatra toy ny script amin'ny cross-site sy ny tsindrona SQL, izay miaro izany ny mpizara
Tazomy hatrany ny rindrambaiko CMS - CMS dia mijoro ho an'ny rafitra fitantanana atiny, izay rindranasa solosaina izay manohana ny famoronana sy ny fanovana ny atiny nomerika ary manohana ireo mpampiasa marobe ao anaty tontolo iaraha-miasa.
Ampidino sy ampiasao plugins sy lohahevitra mendri-pitokisana fotsiny (ohatra ny fahatokisana ny lahatahiry WordPress, aza soratana amin'ny lohahevitra maimaim-poana, isa ny isa ary tsikera sns.)
Misafidiana fampiantranoana azo antoka ary tadidio ny fiarovana ny manodidina ny IP
Raha mampiasa mpizara anao manokana ianao dia ahenao ny marefo amin'ny famerana ny fidiran'ny mpizara
Mampalahelo fa tsy misy fiarovana 100% amin'ny habaka cyber, fa amin'ny fiarovana avo lenta - azonao atao ny mampihena ny vintana amin'ny fanafihana mahomby.
● Fitsinjarana malware
Tena misy tokoa ny fizarana malware raha ny fanafihana cyber no resahina. Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra tatitry ny Lab Kaspersky, 29.4% totalin'ny solosain'ireo mpampiasa no nijaly tamin'ny fanafihana malware iray farafaharatsiny tamin'ny taona 2017.
Matetika ireo mpijirika dia mampiasa ny teknikan'ny fanararaotana na phishing hampiseho ny tenany ho loharano azo antoka. Raha lasan'ny niharam-boina izany ary misintona rindrambaiko manimba, na tsindrio ny rohy izay mamoaka ilay virus, dia voan'ny virus ny solosain'izy ireo. Amin'ny tranga ratsy indrindra, mety hikatona tanteraka ny tranokala: ny mpijirika dia afaka mampiasa fanaraha-maso lavitra hidirana amin'ny solosain'ilay niharam-boina.
Soa ihany ho an'ny fiarovana amin'ny Internet amin'ny ankapobeny, Google dia tsy mandany fotoana ary mazàna mamaly avy hatrany ny lisitra mainty ny tranonkala rehetra mampidi-doza na meloka amin'ny fizarana malware.
Mampalahelo ho anao iharam-boina, na dia tsy ianao no diso - ny tranokalanao dia antsoina hoe spam mandra-pahatongan'ny fampandrenesana misimisy kokoa, mamela ny fahombiazan'ny SEO rehetra hatreto.
Raha mandrara anao Andriamanitra, alao i Google ao amin'ny Search Console anao momba ny phishing, rindrambaiko tsy ilaina, na ny fanapahana hack, dia tokony handray andraikitra avy hatrany ianao.
Anjaranao, amin'ny maha webmaster anao, ny manokana ny tranokala, manombana ny fahasimbana, mamantatra ireo marefo. Na dia toa tsy ara-drariny aza dia miankina aminao ny manadio ny korontana sy mangataha famerenana tranonkala avy amin'i Google.
Aza adino, Google dia eo anilan'ny mpampiasa foana sy ny fiarovana azy ireo. Matokia fa homena anao ny fanampiana feno handamina ny zava-drehetra.
Manoro hevitra anao ny hanavao tsy tapaka ny programa antivirus anao ary hanao scan tsy tapaka, araraotina ireo safidy fanamarinana anton-javatra marobe mba hiarovana tsara ny kaontinao an-tserasera, ary hanaraha-maso ny fahasalaman'ny tranonkalanao.
Torohevitra fiarovana amin'ny tranonkala mahasoa
Matetika kokoa noho ny tsy mino isika fa tsy azo inoana loatra ny mety hahatongavantsika ho iharan'ny heloka bevava amin'ny cyber. Ny marina dia, mety hitranga amin'olona io. Tsy mila mihazakazaka amin'ny orinasa manankarena akory ianao na miditra amin'ny governemanta mba ho lasa lasibatra. Ho fanampin'ny antony ara-bola na ny zavatra inoan'izy ireo manokana, matetika ireo mpijirika dia manafika tranonkala tsy fialamboly fotsiny, na hampihatra ny fahaizany.
Aza manao hadisoana amin'ny rookie momba ny fiarovana ny tranokalanao. Raha tsy izany - ny ezaka ataon'ny SEO na tsia no ho kely indrindra amin'ny olanao. Ho fanampin'izay efa nolazainay tao amin'ny fizarana teo aloha momba ireo fomba fanao natolotra mba hisorohana ny tsy fetezan'ny tranonkala, ny fandrobana, ny phishing ary ny otrikaretina malware, dia tadidio ireto torohevitra manaraka ireto:
Mazava ho azy, ny famoronana teny miafina mahery izay mety tsy hilefitra (araho Torohevitra Google momba ny teny miafina azo antoka)
Amboary ny lavaka fandriam-pahalemana (oh: tsy fanaraha-maso ratsy ny fidirana amin'ny fitantanan-draharaha, ny fivoahan'ny angon-drakitra sns)
Hamarino tsara ny fisoratana anarana ny anaranao amin'ny fisoratana anarana azo antoka ary mividy fampiantranoana azo antoka
Avereno jerena izay manana fidirana amin'ny kaonty sy tahiry famindrana rakitrao
Hamarino tsara fa hamerina handrakitra ny tranokalanao ary manana drafitra fanarenana raha sendra voajirika ianao
Ity dia tendron'ny iceberg fotsiny. Ny tena izy dia tsy afaka mitandrina be mihitsy ianao - alao amin'ny olona iray izay mandray anjara mivantana amin'ny indostrian'ny tranonkala.
Tsy isalasalana fa tsy maintsy atao ny fanatsarana ny fisianao an-tserasera satria miankina amin'ny Google ny mpanjifa amin'ny fahazoana fampahalalana eo noho eo momba ny orinasanao sy ny vokatra / serivisy atolotrao, saingy ampiasain'izy ireo koa izany hanivanana amin'ny alàlan'ny safidiny sy ny fisafidianana cherry izay tsara indrindra ho azy ireo. Raha tadidinao foana ireo torohevitra voalaza etsy ambony ary miova amin'ny HTTPS, raha mampiasa vola amin'ny satroka fotsy SEO ianao dia afaka manantena ny hianika tsikelikely ny SERP.
Ny fiarovana ny tranokala dia tokony ho lasa laharam-pahamehanao indrindra, fa tsy ho fitadiavana tombontsoa SEO fotsiny.
Zava-dehibe indrindra izany amin'ny traikefa fitetezana rano azo antoka an'ny mpampiasa tsirairay, ary koa amin'ny fifanakalozana azo itokisana an-tserasera. Mampihena ny vitan'ny fiakarana sy ny fizarana malware sy viriosy izany ary manafoana ireo fanandramana mpanao heloka bevava manimba hafa izay misy ny halatra famantarana na asa hacking. Tsy misy indostria tsy voaro, koa na inona na inona ifantohan'ny asa aman-draharaha ataonao, tokony hiezaka mafy ianao hihazona ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fiarovana ny tranokala ary hananganana fifampitokisana amin'ireo mpanjifanao sy ny mpanjifanao. Raha ny marina, amin'ny maha webmaster anao - manana andraikitra ianao amin'izany.
Tags: fisolokiana ao amin'ny Internetfanjonoanagoogle famerenanaSokajyny httpskaperskymamela encryptny tenimiafinafikarohana Optimizationtenimiafina azo antokasecuritySEOspoofingtsindrona sqlfamerenana tranonkala